Ngaba i-Quantum Physics ibonisa ukuba uThixo ukhona?
Sayensi I-Quantum Physics
Ukusebenzisa i-Quantum Physics "Ukubonakalisa" Ukuhlala KuThixo
Umngceli okhoyo kwi-quantum mechanics ubonisa ukuba ukugqithiswa kwe-quantum kuphelile xa kubonwa ngumbonisi. Ingumphumo weengqungquthela zemveli zesiCopenhagen ze-physum. Ngaphantsi kwesi sichazi, ngaba oko kuthetha ukuba kufuneka kubekho umbonisi endaweni ukusuka ekuqaleni kwexesha? Ngaba oku kubonisa ukuba kuyimfuneko yokuba uThixo aphile, ngoko ukuba isenzo sakhe sokubheka indalo siyakwenza ukuba sibe khona?
Ukufikelela kweMetaphysical usebenzisa i-Quantum Physics "Ukubonakalisa" ukuPhila kukaThixo
Kukho iindlela ezininzi zokufunda ngokusebenzisa i-quantum physics ukuzama "ukubonakalisa" ubukho bukaThixo kwisikhokelo samanje sokwazi ngokomzimba kwaye, kubo, oku kubonakala phakathi kweyona nto inomdla kakhulu kwaye kunzima kunzima ukugubha ngenxa yokuba ininzi izixhobo ezinyanzelisayo kuwo. Ngokwenene, oku kuthatha ingqiqo ecacileyo malunga nendlela yokuhumusha kweCopenhagen isebenza ngayo, ulwazi oluthile lwe-Anthropic Principal Principal (PAP), kwaye ufumana indlela yokufaka uThixo kwindalo yonke njengento ebalulekileyo kwimimandla yonke.
Ukutolika kweComenhagen ye- quantum physics kubonisa ukuba njengoko inkqubo iqhubeka, isimo sayo senyama sichazwa yintsholongwane yayo. Ukugqithiswa kwe-quantum kuchaza amaninzi akho konke okulungiselelwa kwenkqubo. Kwinqanaba xa kwenziwa umlinganiselo, ukuxubusha kwelo xesha kutyhubela kwilizwe elilodwa (inkqubo ebizwa ngokuba yi-decoherence ye-wavefunction).
Oku kulungelelaniswa kwimizamo yokucinga kunye nokuphazamiseka kweCat Schroedinger , ephilileyo kwaye ifile ngexesha elinye kwaze kwaba yinto ebonwayo.
Ngoku, kukho enye indlela yokulahla ngokuthe ngxaki ingxaki: Ingcaciso yeCopenhagen ye-quantum physics ingalunganga malunga nesidingo somsebenzi oqapheleyo wokuqwalasela.
Enyanisweni, abaninzi befilosofi bacinga ukuba le nto ayimfuneko kwaye bacinga ukuba ukuwa kuvele nje kubangelwa ukusebenzisana ngaphakathi kwenkqubo. Kukho iingxaki ngale ndlela, nangona kunjalo, asinakukwazi ukuphumelela ngokupheleleyo indima enokubakho. (Khangela incwadi ethi Quantum Enigma ukuze ufumane oku ngakumbi ngolu hlobo.)
Nangona sivumela ukuba iCopenhagen ukuchazwa kwe-physics ye-quantum ichanekile ngokupheleleyo, kukho izizathu ezibini ezibonisa ukuba kutheni le ngxabano ayisebenzi.
Isizathu Esinye: Abantu Ababukeleyo Abanelisekile
Ingxabano eqhutyelwa kule ndlela yokubonakalisa uThixo kukuba kukho imfuneko yokuba ngumlindi ukuba kubangele ukuwa. Nangona kunjalo, yenza iphutha lokucinga ukuba ukuwa kufuneka kuthathe ngaphambi kokudalwa kwalowo mboni. Enyanisweni, ukuchazwa kweCopenhagen akukho mfuneko.
Esikhundleni saloo nto, kwakuya kwenzeka ntoni ngokwemvelo ye-quantium yendalo ukuba iphela ikhona njengento ephakamileyo yelizwe, ebonakaliswa ngexesha elifanayo kwiimvume zonke, kuze kube yilapho ixesha elilindelekileyo livela kwindawo enye. Ngelo xesha umbonisi okhoyo unakho, kukho ngoko, isenzo sokubheka, kwaye iphela iphela iphela.
Oku kubaluleke kakhulu ingxabano ye- Anthropic Principal , eyadalwa nguJohn Wheeler. Kule meko, akukho mfuneko yokuba uThixo, kuba umbonisi (mhlawumbi abantu, nangona kunokwenzeka ukuba abanye ababukeleyo basitshitshise kwi-punch) nguye ngokwakhe umdali wendalo yonke. Njengoko kuchazwe nguWindows kwi-intanethi yango-2006:
Sithatha inxaxheba ekubeni singabikho nje kuphela kwaye silapha kodwa kude nakude. Siyilo ngqiqo, abathathi-nxaxheba ekulethe into ethile kwindalo yonke edlulileyo kwaye ukuba sinenkcazelo enye yezinto ezenzeka kwixesha elidlulileyo kutheni sifanele siswele ngaphezulu?
Isizathu Sokubini: UThixo Obonayo Akazibali NjengeNgqalelo
Okwesibini ukungaphumeleli kulo mgca wokuqiqa kukuba ngokuqhelekileyo ubophelelwe ngcamango yodhixo onobunzima oye waqonda yonke into eyenzekayo kwindalo yonke.
UThixo akaqhathaniswa ngokungaqhelekanga njengamabala angaboniyo. Enyanisweni, ukuba i-acumen yobugqwetha bukaThixo iyimfuneko ebalulekileyo ekudalweni kwendalo yonke, njengokuba ingxabano ibonisa, mhlawumbi yena akayi kuvumela ukunyuka okukhulu.
Kwaye kubangela ingxaki ethile. Ngoba? Isizathu esiyodwa esaziyo malunga nombono wokuqwalasela kukuba ngamanye amaxesha akukho nto ibonwayo. Oku kubonakala ngokucacileyo kwilingo le- double cublit experiment. Xa umntu enza umboniso ngexesha elifanelekileyo, kukho umphumo omnye. Xa umntu engenzi, kukho umphumo ohlukileyo.
Nangona kunjalo, ukuba uThixo owaziyo wayejonge izinto, ngoko akuyi kuze kubekho "umbonisi" okubangelwa kulo mzamo. Iziganeko zaziza kuqhubeka zibonakala ngokungathi kukho umbonisi. Kodwa kunoko sihlala sifumana iziphumo njengoko silindele, ngoko kubonakala ngathi kulo mzekelo, umntu ojongayo nguye kuphela ochaphazelekayo.
Nangona ngokuqinisekileyo oku kubangela iingxaki kuThixo owaziyo, akavumelanga ngokupheleleyo unkulunkulu ongeyena owaziyo, mhlawumbi. Nangona uThixo ekhangele inqabileyo nganye, uthi, i-5% yexesha, phakathi kweminye iminye imisebenzi eyahlukeneyo yezenkolo, iziphumo zenzululwazi ziza kubonisa ukuba i-5% yexesha, sithola "umbonisi" umphumo xa sifanele sifumane "akukho mbonisi" umphumo. Kodwa oku akukwenzekayo, ngoko ke ukuba kukho uThixo, ngoko / yena ngokucacileyo ukhetha ngokungaqhelekanga ukuba angakhange abuke kwiincinci ezihamba kule mihlaba.
Ngaloo ndlela, oku kuphikisa nayiphi na ingcamango kaThixo owazi konke-okanye ezininzi izinto-kwindalo yonke.
Ukuba uThixo ukhona kwaye uyabonakala njengomlindi "kwi-quantum physics sense", ngoko kuya kufuneka ukuba ube nguThixo ongeke enze nayiphi na ingqalelo, okanye ngaba iziphumo ze-physics ye-quantum (zona zizama ukusetyenziswa ukuxhasa Ubukho bukaThixo) ahluleki ukwenza nayiphi na ingqiqo.
I-Quantum Computers ne-Quantum Physics
EPR Paradox kwiFizikiki
Ihlabathi elininzi Ukutolika kwe-Quantum Physics
Iyini i-Quantum Gravity?
Ingaba i-Quantum Physics ingasetyenziselwa ukucacisa ubukho boBugcisa?
Izibambiso zesiLwimi zesiJapan - Matsu
Imfazwe Yehlabathi II: Ukusebenza kweLila kunye neClawling of the French Fleet
Lungiselela kwaye unikeze iNtetho yeNtlanganiso yeSigqibo sePrayimari
Ngubani oyintloko oyi-Osceola? Nantsi into eyaziwayo malunga ne-Florida State mascot
Udlala njani ibhola lebhola lebhola
Indlela yokubala i-pH - Ukuhlaziywa ngokukhawuleza
101 UkuHlola kweNcwadi yeNzululwazi eNkulu
Funda ukudlala ezi 10 Iimvumi zelizwe eliqhelekileyo
Indlela i-NASCAR Splits ngayo Imali Yomvuzo
Iimviwo zama-Academic Awards ka-1928
Ubungqina bobuqu kwiZithuba: Indlela esebenza ngayo
Imvelaphi yeMbali yeDromedary neBactrian Camels
I-Anatomy, i-Evolution, kunye neNgqungquthela yeZakhiwo eziHlangeneyo
Uhlala phi? Igama leDolophu e-Funniest kuMmandla ngamnye waseMelika
Ibali lika Hare Krishna Mantra